तिथि मेरो पत्रु » कसरी एक तोड माथि पछि सामना गर्न
बेन त्यागिदेऊ & जेरी गरेको. अनि तन्तुहरू को बक्स. यो छ किनभने समय बाहिर त्यहाँ प्राप्त र सँगै फिर्ता आफ्नो जीवन राख्न. यो तपाईं तत्काल कुनै मा प्राप्त र एक आँखा को झिम्काइ मा अर्को मा कदम जहाँ केही चमत्कारी रोमान्टिक चलचित्र जस्तै हुन गइरहेको छैन. तर बाहिर त्यहाँ रही र आफ्नो मन रहेर सक्रिय तपाईंलाई ब्रेक-अप बारेमा धेरै र समय भावना धमिलो हुँदै जानेछ र निम्न तीन विकल्प मदतले भंग गर्नेछ आफ्नो हृदय मा latching छ कि अदृश्य मुद्दा लाग्छ छैन:
यो आफ्नो काम वा स्वैच्छिक काम वा दुवै वा कलेजमा वा काम को अनुभव को एक मिश्रण छ चाहे, कि मा ध्यान राखन. यी कुराहरू आफ्नो भविष्यको लागि हो र यो समय मा धेरै गाह्रो महसुस गर्न सक्छन् तापनि केही ब्रेक-अप बाटो छैन प्राप्त गरौं छैन भनेर सम्झना. साथै तपाईं संभवतः एक साँझ वर्ग लिन सक्छ. बस प्रक्रिया मा आफैलाई खिइएर छैन. केवल तपाईं को लागि सक्षम छौं के मा ले!
तपाईंको ख्याल मान्छे संग यो बाहिर कुरा. बाहिर संसारमा एक कठोर माथि होंठ मा राख्दै गर्दा असफल र आफ्नो भावना दिँदै लाज छ ब्रेक-अप vulnerably परिवार र साथीहरूलाई बाहिर प्रवाह. यो आफ्नो मन र तपाईं यो थाहा कि छैनौं भनेर बाहिर प्राप्त गर्न छोड छन् कि ती आँसु को आफ्नो टाउको पार्नुहुनेछ. त्यसैले धेरै मानिसहरूले आफ्नो मा एक तोडने-अप सामना गर्न प्रयास र यो स्वस्थ छैन. बारेमा के तपाईं प्रेम गर्ने मान्छे कुरा गरेर तपाईं सुरक्षित र चहकिलो आँखा को एक धेरै चहकिलो भावना संग दुनिया मा लिन सक्षम हुनेछ बारी मा तपाईं चोट छ.
म तपाईं चोट होमवर्क गर्दा कहिलेकाहीं यो मजा गाह्रो हुन सक्छ भनेर थाह. तर यो अन्त मा यो लायक हुनेछ किनभने यो माध्यम धक्का आफ्नो मुश्किल प्रयास. बाहिर जानुहोस् (तपाईं भङ्ग नहुँदा!) र पब मा परिवार वा साथीहरूसँग आनन्द, संगीत वा संगीत मा, आदि … घरमा आफ्नो समस्या छोड. चासो र यस्तो पढाइ रूपमा सोख खुसी राख, संगीत सुन्दा र टिभी हेरेर. तपाईं के एक पटक यो फिर्ता तपाईं थिए जहाँ एक कठिन सडक हुन सक्छ किनभने आफैलाई तपाईं रहेको व्यक्ति गुमाउन नदेऊ. नयाँ प्रेम पा आफ्नो समय लिनुहोस्. त्यसो गर्न कुनै द्वारा दबाब महसुस नगर्नुहोस्. आफ्नो समय मा, प्रेम गरौं.